Qaadashada Maraykanka ka soo Turkey Round 2 diyaaradaha ayaa waxaa hawada ka Sahayda Sincan Medical | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraRound 2 jiray hawada ka Mareykanka ka soo Turkey Sincan Medical Supplies Diyaaradaha Carrier
30 / 04 / 2020 06 Ankara, GUUD, cimilada, coronavirus, Headline, ISDIFAACA, DAQIIQADII MINUTE, TURKEY
safar Turkiyede abdy diyaarad waday sahay caafimaad ahaa etimesgutt Hawal ah
Our xulufada NATO Maraykanka codsado, si ay u taageeraan dagaalka ka dhanka ah Maraykanka ee America si ay u bixiyaan qalabka caafimaadka la Turkey Coronavirus.
Turkey Covidien-19 caawiyay wadar ahaan 55 dal oo lagu jiro faafa iyo sii wadaan in ay noqon bixiyayaasha 3aad ee dunida ugu weyn ee gargaarka bani'aadamnimada.
Bayaanka ay soo saartay Agaasinka Isgaarsiinta, waxaa ku dhawaaqay Wasaaradda Difaaca Qaranka iyo Wasaaradda Caafimaadka in 500.000 oo maaskaro qalliinka lagu sameeyay, 4.000 oo maaliyad ah, 2.000 litir oo jeermis dileyaal ah, 1.500 galaas, 400 N95 maaskaro iyo 500 oo kuwa indha indheeya difaaca ah loo diri doono Mareykanka.
Diyaarad nooca nooca nooca A400M oo nooca xamuulka qaada ah oo ay la shaqeynayeen ciidamada Cirka Turkiga ayaa ka dhoofay garoonka diyaaradaha ee Ankara Etimesgut Talaadadii (28-kii Abriil) waxayna qalabkaas u qaateen Mareykanka. Wareegii labaad ee kaalmada, Diyaaradda Gaadiidka Cirka ee C-2E ee ka socota Ankara / Etimesgut waxay isu diyaarineysaa bixitaanka.
War saxaafadeedka ayaa lagu by Madaxweynaha Jamhuuriyadda Turkey Isgaarsiinta Madaxtooyada dhigay, "In mustaqbalka, baahida loo qabo in uu noqdo sida ugu wanaagsan si ay uga caawiyaan saaxiibadeena iyo xulafadooda our, waxaana ku balan qaaday in ay garab quruumaha dunida ku baahsan waqtigan adag." hadalada ayaa dhacay.
Wasiirka Difaaca Qaranka Hulusi Akar ayaa bayaan uu soo saaray Abriil 4 ku sheegay in unugyada xiriirka la leh Wasaaradda Difaaca Qaranka ay soo saaraan wadar ahaan 1 milyan oo maaskaro, 5 kun oo cabir ah, iyo 5 kun oo litir oo jeermisyada aalkolada leh ah usbuucii, iyo dadaalkaas oo ah in la soo saaro 2,5 milyan oo maaskaro ah iyo boqol kun oo kaabis ah usbuucii. ayaa ku dhawaaqay in la dhammeeyay.
Wasiir Akar, oo ka warbixiyay saadka iyo soo saarista dawooyinka, ayaa sheegay in baahiyaha ciidamadu si joogto ah loo daboolay wuxuuna yidhi, “Waxaannu gaarsiinay 640 kun oo maskiin ah, 15 kun oo iskumar ah, iyo ku dhawaad ​​kun litir oo jeermi ah shalay iyo maanta.”
Covidien-19 si Turkey ayaa weli la dhibtooneysa gacan Country
Bayaankii ugu horreeyay ee ay soo saartay Wasaaradda Difaaca Qaranka ee gargaarka loo diray Ingiriiska: “Madaxweynahayaga Mr. Diyaaradda ay leedahay Ciidamada Qalabka Sida ee Turkiga, oo ay soo diyaarisay Wasaaradda Caafimaadka oo ay weheliso tilmaamaha Erdogan oo loo adeegsan doono la-dagaallanka COVID-19 ee ka dhanka ah Ingiriiska, ayaa laga qaaday Ankara Etimesgut ”.
Diyaaradda A400M oo ay leedahay Ciidanka Qalabka Sida ee Turkiga, xulafadayada NATO, Britain, waxaa lagu sameeyay warshado milatari iyo kuwo gudaha ah oo ku yaal warshadaha militariga, Warshadaha Warshadaha iyo Kiimikada iyo guryo ku tolay Wasaaradda Difaaca Qaranka; maaskaro ilaalin ah, maaskaro ilaalin weji ku dheehantahay, maaskaro ilaalinaysa indhaha, kaabida iyo dareeraha kahortaga bakteeriyada.
Marka la eego baaxadda faafa fayraska 'Covid-19 virus', gargaarka waxaa gaarsiiyey diyaaradaha dagaalka ee AAFM AAFM ee TAF, oo sahayda gargaarka u waday Serbia, Bosnia iyo Herzegovina, Montenegro, Waqooyiga Makedonia iyo Kosovo.
Qoraal ay soo saartay Wasaaradda Difaaca Qaranka, “Madaxweynahayaga Mr. Maaskaro, daboolida iyo xirmooyinka baarista ee ay diyaarisay Wasaaradda Caafimaadka ee ku saabsan amarada Erdogan waxaa loo gaarsiin doonaa Serbia, Bosnia iyo Herzegovina, Montenegro, Waqooyiga Makedonia iyo Kosovo diyaaradaha ay leeyihiin Ciidamada Qalabka Sida ee Turkiga. ” hadalada waxaa ka mid ahaa.
Talyaaniga iyo Spain
Marka la eego baaxadda cudurada faafa ee 'Covid-19 virus', agabyada gargaarka ayaa loo diray Spain iyo Talyaaniga 1-dii Abriil, 2020 oo ay soo direen diyaaradaha dagaalka ee militariga ee AAFM.
Waxaa laga soo saaray xarumaha maxalliga ah iyo kuwa qaran ee warshadaha militariga ee ku yaal Wasaaradda Difaaca Qaranka, Shirkadda Warshadaha Warshadaha iyo Kiimikada iyo guryaha tolidda, oo ay la socdaan diyaaradaha dagaalka A400M ee Ciidamada Qalabka Sida ee Turkiga; maaskaro dabool leh, maaskaro ilaalin weji ku dheehantahay, maaskaro ilaalinaysa indhaha, dheecaanka jirka iyo dheecaan ka hortaga bakteeriyada ayaa la diray.
Turkey, Syria, ayaa sidoo kale la dhibtoonaya inuu Covidien-19
Tallaabooyinka laga qaadayo ee Covidien-19 ka dillaacay dalka Turkiga ayaa la hirgeliyo gobolka this.
waxaa ka soo Turkey looma ogola inay soo galaan iyo ka bixitaanka. Iyadoo la joojinayo howlaha waxbarashada, buufinta waxaa lagu sameeyaa iskuulada. Diyaargarowga waxbarashada khadka tooska ah ayaa la sameynayaa. Jimcaha iyo waqtiga salaadaha ayaa la kala dhex galay masaajidada. Saacadaha shaqada ee dabacsan ayaa la hirgaliyaa. Ogeysiisyo, fiidiyowyo, boodhadh iyo qoraallo ku qoran luuqadda Carabiga ah ee laxiriirta shaqsiga iyo qiyamka qoyska ayaa loo qaybiyaa dadweynaha si baaxad leh.
Tallaabooyinka COVID-19 ayaa laga hirgaliyay isbitaallada Turkiga iyo xarumaha caafimaadka ee aagagga nabdoon.
Shaqo ayaa socda si loo soo qaato xirmooyinka baaritaanka, qalabka difaaca iyo qalabka caafimaadka. (Isha: defenceturk)
The Pride of Turkey ahayd hawada, waayo, HURKUS April 23
Dugsiga tacliinta ee Beykoz Logistics wuxuu soo dhaweynayaa ardayda Maraykanka
Dalka Mareykanka, haweeney ayaa ku dhacday jidka tareenka ee ilmaha iyada oo gacmaheeda ku jirta.
Badeecadaha Wagon ee hoos ku dhacay Maraykanka sababtoo ah hoos u dhaca dhuxusha iyo dhoofinta dhuxusha
Gaadiidka tareenka ee kuyaal Maraykanka (Video)
Shirkadaha Maraykanku waxay u yimaadeen wadashaqayn iyo wadashaqayn la leh sahayda Turkiga
Diyaarad xamuul oo nooca A400M
Diyaaradaha dagaalka C-130E
Wadada Tareenka ee Baltimore Ohio
Taariikhda Maanta: 16 May 1991 TCDD Ankara Furan hawo furan
Sidee Adeegyada Metro, Ankaray iyo EGO Bus ay ku sii jiri doonaan Ankara 4-maalmood Xaddidid?